इभेन्ट Archives - Page 20 of 50 - Purbeli News
शृंखलाको भेरिफ़ाईड फेसबुक पेज किन देखियो यस्तो ? भोटगर्न अब केहि घण्टामात्र बाकि, छिटो गर्नुस् (भोटगर्ने तरिका सहित)
इटहरी/ मिस नेपाल शृंखला खतिवडा यतिबेला मिस वर्ल्डको ताज नेपाल ल्याउनको लागि काममा कसेर लागिपरेका छिन । तर यहि बेला उनको फेसबुक पेजमा केहि समस्या आएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । उनको आधिकारिक फेसबुक पेज लाई फ़ेसबुकले भेरिफ़ाईड पनि गरिसकेको छ । तर अहिले त्यो भेरिफ़ाईडको सिग्नल देखिएको छैन । यतिमात्र हैन १६ घण्टाअघि लास्ट अपडेट गरिएको उक्त पेजको ...
कहाँ के गर्दैछन् अविवाहित पूर्व मिस पूर्वाञ्चलहरू (फोटोफिचर सहित )
इटहरी । यतिबेला मिस नेपाल २०१८ की बिजेता श्रृंखला खतिवडा मिस वल्र्डमा प्रबल दाबेदारका रुपमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेकी छिन । उनलाई उपाधि जिताउन सबै नेपाली कम्मर कसेर लागेका छन । यता सन २०१० देखि शुरु भएको मिस पुर्बाञ्चल पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरकै ईभेन्ट हो । ८ बर्षदेखि निरन्तर भईरहेको यो प्रतियोगितामा बिजेता बनेका सुन्दरीहरु कहाँ के गर्दैछन भन्ने बिष...
नेपाल आइडलको भोली प्रसारित हुने एपिसोड राष्ट्रियता जगमगाउने एपिसोड हुने , धुर्मुस सुन्तली’ गेस्ट बनेर आउने , हेर्नुस् प्रोमो (भिडियो)
काठमाडौँ / अहिले सबैतिर नेपाल आइडलकै चर्चा रहेको छ। नेपाली टेलिभिजनकै इतिहासमा सर्वाधिक लोकप्रिय रियालिटि शो नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनबाट पोखराकी गोल्डेन माइक होल्डर निलिमा थापा मगर बाहिरिएकी छिन्। नेपाल आइडलमा निर्णायक न्हयु बज्राचार्य, काली प्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी छन् भने प्रस्तोतामा रिमा विश्वकर्मासँग अभिनेता आसिफ शाह छन् ।नेपाल आइडल ए...
सारेगमपा लिटिल चैम्सको तेस्रो राउण्ड पार गर्दै ​इटहरीका प्रितम
इटहरी / इटहरीका ११ बर्षीय प्रीतम आचार्य भारतीय च्यानल जी टिभीको सारेगमपाको लिटिल चैम्समा तेस्रो राउण्ड पार गर्न सफल भएका छन् । उनले तेस्रो राउण्डमा स्वर सम्राट नारायण गोपालको गलती हजार हुन्छ बोलको गीत गाएर निर्णायकको मन जित्न सफल भएका हुन् । उनी सारेगामापाको पहिलो चरणमा पर्न सफल भएपछि भारत गएका हुन् । प्रितमले पहिलो चरणमा जिना जिना बोलको हिन्दी...
भोटमा अघि बढ्दै श्रृङखलाको प्रतिष्पर्धी, अहिलै भोट गर्नुस् अनि जानकारिको लागि शेयर गर्नुस् (भोट गर्ने तरिका)
हिजो सम्म ४०.०१ % भोटिङ भएको मा आहिले घटेर ३६.६१% मा झरेको छ । र नेपालको भोट घट्ने क्रममा छ ! अन्य प्रतिस्पर्धाीको बढ्दै गएको छ । नेपाललाई अझै धेरै भन्दा धेरै भोट को आवश्यकता हुन्छ । धेरै जनालाई भोट गर्ने तरिका अझै थाहा नभएको हुनाले तल भोट गर्ने तरिका हेर्नुहोला !! यो पोस्ट चारैतिर सेयर गर्नुहोला । जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला! (vote & Share &...
हेड टु हेड च्यालेन्जमा श्रृंखलाले दिएको जवाफ पहिलो नम्बरमा (भिडियाे सहित)
इटहरी/ यतिबेला ‘मिस वर्ल्ड–२०१८’मा सहभागी नेपाली चेली मिस नेपाल–२०१८’ बिजेता श्रृखंला खतिवडा चौतर्फी चर्चामा छिन । मिस वर्ल्ड–२०१८ को विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकी मिस नेपाल–२०१८ शृंखला खतिवडा अघिल्लो चरणमा पुगेकी छन्। उत्कृष्ट ३० मा छनोट भएकी शृङ्खला सेमिफाइनलमा पुगेकी छन् । त्यसो त नेपालको तर्फ बाट प्र...
थारु डान्स स्टार अडिशन शुरु
सुनसरी / थारु डान्स स्टार–२०७५ प्रतियोगिताको अडिशन सुरु भएकाे छ । खोज नयाँ प्रतिभाको उद्देश्य राखेर थारु जागरण अभियानले आज बाट थारु डान्स स्टारको अडिशन झुम्काबाट सुरु गरिएको हो । गाउँ तथा शहरमा रहेका थारु युवा युवतीमा लुकिएको प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्धेश्य थारु डान्स स्टार प्रतियोगिताको विभिन्न सहरमा अडिशन सुरु गरिएको आयोजक जनाएको छ । थार...